TAMAANDHAYNTA "KöNIGSBERG": SIFOOYINKA IYO SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, DHALIDDA, TALOOYINKA TAYADA SII KORDHAYA IYO SAWIRRADA - BEER CAGAARAN
Kala duwan yaanyo yaryar oo leh fawaakih balaaran oo caleemo leh oo loo yaqaan "Königsberg"
Miro kale oo cajiib ah oo ka mid ah shaqooyinka aqoonyahanka Siberia - beeraha - noocyo kala duwan oo yaanyo ah "Konigsberg". Waxay leedahay dhowr nooc oo kala duwan - "Königsberg Red", "Königsberg Gold" iyo "Königsberg New". Mid kasta oo ka mid ah ayaa leh kala duwanaansho, laakiin isku midka ah ee wax-soosaarka sare iyo miraha waaweyn waa wax aan la fahmi karin.
Waxaad wax dheeraad ah ka baran kartaa tamaandhooyinkan maqaalkeena. Halkaas, waxaan kuu diyaarinay sharaxaad buuxda ee noocyada kala duwan, astaamaha, sifooyinka ugu muhiimsan iyo astaamaha farsamada beeraha.
Tomato "Konigsberg": sharaxaada noocyada kala duwan
Magaca dugsiga Königsberg
Sharaxaad guud Fasalka bartamihii xilli-dugsiyeedka oo dhan
Bisaylka 110-115 maalmood
Foomka Muddo dheer, cylindrical leh sanka yar
Cunto dhexdhexaad ah 300-800 garaam
Noocyo dhaadheer 5-20 kg mitir labajibbaaran
"Königsberg" waa noocyo madaxabannaan oo madaxabannaan ah, taas oo soo jiidatay dhammaan tayada ugu fiican. Dhirta Königsberg, oo ah nooca koritaanka, ayaa loo tixgeliyaa inay tahay mid aan caddayn (i.e. ma laha barta dhamaadka koritaanka), illaa 2 m dhererka, sida caadiga ah waxaa loo sameeyay 2 canab oo xoog leh oo leh burushyo badan. Burush kasta wuxuu ka kooban yahay 6 khudaar. Stamb ma sameyso.
Liibaan xoog leh, oo eegaya qoto dheer. Caleemaha waa weyn "baradho" cagaar mug leh oo leh jinsiyad yar yar. Duufaanku waa mid fudud (caadi ah), waxaa la sameeyay markii ugu horeysay caleen 12aad, ka dibna wuxuu marayaa 3da caleemo. Ku dheji xayiraad. By waqtiga Bisaylkiisa dhexe-Bisaylkiisa - goosashada waa suurto gal at 110-115 maalmood ka dib markii laga beerto abuur ah.
Waxay u adkaysaa cuduro badan iyo cayayaanka. Tamaandhada "Königsberg" ayaa lagu sameeyey dhul furan, waxay si fiican u dhaqmaan aqalka dhirta lagu koriyo, ma aysan engegin. Wax-soo-saarka ayaa sareeya. Laga bilaabo 5 ilaa 20 kg oo leh 1 jibbaaran. m Sida laga soo xigtay dib u eegista ee bannaanka u soo ururin karaa qiyaasta saddex baaldiyo ka baadiyaha ah.
kulaylka iyo iska caabida qabow;
caabbinta cudurada iyo cayayaanka;
aan qabyo ahayn.
Ma jiraan wax khasaare ah oo ku habboon daryeel leh. Cabbirka miraha waa mid cajiib ah, isagoo leh "yaanyo" macaan iyo dhadhan.
Waxaad isbarbar dhigi kartaa dhalidda kala duwan ee noocyo kala duwan miiska:
Königsberg 5-20 kg mitir labajibbaaran
Qurux badan 10-14 kg halkii mitir labajibbaaran
Premium 4-5 kg ​​ka baadiyaha
Marissa 20-24 kg mitir labajibbaaran
Gardarro 11-14 kg halkii mitir labajibbaaran
Katyusha 17-20 kg mitir labajibbaaran
Debut 18-20 kg mitir labajibbaaran
Malabka pink 6 kg oo baadiyaha ah
Nikola 8 kg mitir labajibbaaran
Persimmon 4-5 kg ​​ka baadiyaha
On our site waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo faa'iido leh oo ku saabsan sida loo koro geedo yaanyo. Akhri dhammaan wixii ku saabsan geedo beerto ah ee guriga, intee ka dib markaad abuurto abuurka miraha iyo sida loo si fiican u biyo u cabbo.
Iyo sidoo kale sida ay u koraan yaanyada ee bareer ah, dusha sare, oo aan dhulka, dhalooyinka iyo sida ay tignoolajiga Shiinaha.
Qaabkani waa mid qulqulaya, oo la mid ah wadnaha cidhiidhi ah oo leh caarad fara badan.
Midabka bislaada waa casaan.
Cabbirka miraha waa mid weyn, miisaanka ayaa gaari kara 800 g, celcelis ahaan - 300 g.
Maqaarka waa siman, cufan. Ma jajabiyo.
Qadarka maaddada qallalan ee miro ayaa ah dhexdhexaad. Tirada qolalka waa 3-4, iyadoo badan oo abuur ah.
Cufnaanta tamaandhada si dhakhso ah uma sii xumaanayso midhaha, gaadiidka dulqaadan, muddo dheer lagu kaydiyo.
Waxaad isbarbar dhigi kartaa miisaanka midhaha noocyo kala duwan leh noocyada kale ee miiska:
Königsberg 300-800 garaam
Blizzard 60-100 garaam
King Pink 300 garaam
Mucjiso beerta 500-1500 garaam
Icicle Black 80-100 garaam
Chibis 50-70 garaam
Shukulaatada 30-40 garaam
Pear Yellow 100 garaam
Gigalo 100-130 garaam
Novice 85-150 garaam
Tamaandho waxay leeyihiin dhadhan fiican iyo tiro badan oo ah maaddooyin wax ku ool ah, oo ku habboon isticmaalka cusub. Marka karinta ayan luminayn qaabkeeda, waxay ku haboon tahay ilaalinta. Isku daridda ama qaadista oo dhan maaha mid macquul ah sababtoo ah mugga weyn. Waxaa lagula talinayaa inay soo saaraan waxyaabaha yaanyada - baastada, suugada, casiirka.
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa si aad u ogaato sawirada kala duwan ee yaanyo "Konigsberg":
Waddanka laga tirtiro waa Ruushka (Degmada Siberian). Ku soo galay Diiwaanka Gobolka ee Xulufka Ilaalinta Guuleysiga Federaalka Ruushka ee Furan ee 2005. Patent. Kormeerka yaanyada waxaa lagu fuliyay gobolka Novosibirsk, natiijo aad u fiican. Waxaa loo heli karaa beerashada dhammaan gobollada. Aan ka baqin meelaha kulul, iska caabida qabow.
Seeds waxaa lagu daaweeyaa xalka laysku duro si looga hortago muuqaalka cudurka. Waxa kale oo suurtagal ah in la isticmaalo xalalka kicinta koboca dhirta - qoyan habeenkii. Ku beeray weel caam ah oo qoto dheer ah 1 cm bilowga - badhtamaha March. Bannaanka u badan yihiin waxay ku saleysan tahay jadwalka Dayaxa, beerashada dalagyada. Yaanyada yaryar ayaa kori doona haddii aad iyaga ku beeranayso inta lagu jiro wajiga sii kordhaya ee dayaxa.
Iyada oo muuqaalka ka muuqda 2-3 go'yaal cad oo qashinka ah (geedo lagu shubay weelal gaar ah). A loo qaado loo baahan yahay si looga fogaado dulmiga dhirta. Geedo waa in aan marar badan la waraabin, ka fogow biyaha caleemaha. Qiyaastii maalintii 50aad, geedo waxaa lagu beeray karaa aqalka dhirta lagu koriyo, 10-15 maalmood - waxaa lagu beeray dhul furan, iyadoo la ilaalinayo rinjiga. Markaad ku degto meel joogto ah, biyo geedo badan oo loogu talagalay in lagu beddelo tallaal dheeri ah - sidaa daraadeed afkoda iyo xididada lama waxyeeleyn doono.
Ciidda ee deganaanshaha rasmiga ah ee yaanyada waa in la diyaariyaa - laga daweeyey infekshin, Bacriminta (mullein), si fiican u diirran, ayaa lagu daray. Marka laga beerto dhul furan ama yaanyada aqalka dhirta ah ee toddobaadkii iyo badh waa in keligaa laga tago, ha biyahin. Kadibna, bacarimiso macdanta, ka soo kabashada cudurrada iyo cayayaanka ayaa suurtagal ah marka la eego jadwalka caadiga ah - celcelis ahaan 10 maalmood oo kasta.
Akhri maqaalo waxtar leh oo ku saabsan Bacriminta yaanyada.:
Ka waraabinta xididka waa mid ballaadhan, laakiin ma aha mid joogto ah. Najiib iyo loosening waa la soo dhaweynayaa. Daaqsiintu waxay u baahan tahay 2 cagar si ay u sameeyaan. Qoyska kore waxaa laga saaraa ilaa 3 cm oo dheer, ka saarida geedi socodka waaweyn waxay dhaawici doontaa dhirta. Kombiyuutarka ayaa la sameeyaa mar 2-dii toddobaadba mar, wuxuu joojiyaa marka miraha ugu horreeya la sameeyo.
Sababtoo ah koritaanka ballaaran ee dhirta u baahan tahay xirashada. Caadi ahaan waxay ku xiran yihiin booga kala duwan ama trellis. On dhulka u furan, trellis waxaa badanaa loo isticmaalaa, in lagu koriyo, khariidada waxaa sida caadiga ah loo qaaday si silig loo fidiyo at height ah.
Si fiican u adkaysata cudurada intooda badan, kama baqdo cayayaanka. Si kastaba ha noqotee, buufinta daaweynta neefsiga waa suurto gal.
Tamaandhada waxay ka soo baxday dhammaan calaamadaha tayada - dhadhan badan, dhadhan fiican, dhalidda sare, iska caabida cudurada, aan qabyo ahayn. Koenigsberg wuxuu ku haboon yahay beerashada bilowga.
Hore u bislaaday Xilliga dhexe Gaar ahaan hore
Goobta beerta Goldfish Um Champion
Hurricane Wax yaabaha rasmiga ah Sultan
Red Red Mucjisada suuqa Cibaadada
Volgograd Pink De barao madow Transnistria Cusub
Elena De Barao Orange Guduudan weyn
May Rose De Barao Red Ruushka
Abaalmarin sare Salaan sharaf leh Pullet